Nin soomaaliya u safray oo maxkamada mandheera ay go’aamisay in 10 sano la xiro – The Voice of Northeastern Kenya
Nin soomaaliya u safray oo maxkamada mandheera ay go’aamisay in 10 sano la xiro
Star FM October 19, 2016
Simon Karuga Gitau oo ka soo jeedo degaanka Mwea ee countiga , Kirinyaga ayaa mudo 10 sano ah xabsi ku jiri doonoo kadib markii shalay ay maxkamad ku taalo magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya go’aankan soo saartay.
Ninkan oo 32 sano jir ah oo maxkamada la horgeeyay ayaa lagu cadeeyay in uu si sharci dara ah ugu safray dalka soomaaliya.
Garsoore lagu magcaabo Peter Areri oo kiiskan dhageysanayay ayaa sheegay in Simo uu ku sugnaa wadan ay koox argagixiso ka howl gasho isaga oo anan marin xafiiska waaxda socdaalka ee loogu talagalay.
Mr Gitau ayaa la qabtay 13-kii bishii Sagalaad ee sanadan 2016-ka isaga opo soomaaliya ku sugan.
Dadka rayidka ah ayaa ku wargeliyay ciidamada booliska ee soomaaliya oo ugu dambeyn u soo wareejiyay laamaha amaanka ee Kenya.
Isaga oo isdifaacayo. Ayuu ninkan sheegay in degaanka uu ka soo jeedo ee Mwea uu ka so tagay 31-dii bishiin August ee sanadan oo uuna Mandheera tagay si uu uga shaqeeyo howlaha guri dhiska.
Markii uu Mandheera yimid ayuu sheegay in uu seexday loojin uu habeen kasta ka bixinayay 200 oo shilin balse uu raadsaday guri uu bil kasta lacag yar bixin karo sidaas awgeedna uu ugu gudbay soomaaliya.
Mr Areri ayaa ku gacan seyray in guri lacag yar oo uu ninkan raadsanayay aynan keeni Karin in uu soomaaliya aado.
Ugu dambeyntina , 9-kii bishii Tobnaad ee sanadii la soo dhafay ee 2015-kii ayey dowlada Kenya ku dhawaqday in soomaaliya ay argagixiso ka howlgasho sidaas awgeedna , rayidkeeda anan loo ogoleyn in ay soomaaliya aadan iyaga oo anan ogolaansho rasmi ah la siinin.
← Madaxweynaha oo ku baaqay in anan la siyaasadeynin mashruuca biyaha loogu soo jiidayo countiga Nairobi.
Hay’adda WFP oo cuno u qeybisay qoysaska ku dhaqan countiga Samburu oo ay abaaraha saameyeen →